Xildhibaano ka soo horjeestey dhismaha Golaha Deegaanka Buuloburte - Jowhar Somali news Leader
Home News Xildhibaano ka soo horjeestey dhismaha Golaha Deegaanka Buuloburte
Xildhibaano ka soo horjeestey dhismaha Golaha Deegaanka Buuloburte
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ayaa ka soo horjeestey qorshaha dhismaha golaha deegaanka degmada Buuloburte ee gobolka Hiiraan.
Xildhibaanadan oo ka soo jeeda degmada Buulo-burte oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Jowhar ayaa waxaa ay ku eedeeyeen inaysan dowlada Hirshabelle aysan wax horumar ah gaarsiin degmada Buuloburte.
“Degmada go’odoon ayay ku jirtaa Hirshabellana waxba uma qaban haatana looma dhisi karo gole deegaan iyadoo aan dib u heshiisiin loo sameyn shacabka deegaanka.”ayuu yiri Ismaaciil Maxamed Nuur oo ka mid ah xildhibaanada Hirshabelle.
Xildhibaan Ismaaciil ayaa u digey hay’adaha maalgelinaya dhismaha inaysan dhibaato u horseedin shacabka Buuloburte.
Sidoo kale xildhibaan Wehel Mahdi Hilowle ayaa ku dhaliilay maamulka HIrshabelle inaysan tixgelin siin xildhibaanada ka soo jeeda degmada Buuloburte isla markaana la qorsheynayo in Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare uu tago magaalada Buuloburte.
Sidoo kale shirkan jaraa’id ayaa waxaa ka hadlay xildhibaano kale oo dhammaantood sheegay inay ka digayaan qaabka loo wado dhismaha golaha deegaanka Buuloburte.
Dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxa ay dadaal ugu jireen sidii loo dhisi lahaa golaha deegaanka degmada Buuloburte iyadoo hore maamulka Hirshabelle ku guuleystey inuu dhiso golaha deegaanka degmada Warsheekh ee gobolka Sh/dhexe.